7 SEO Key Strategies I Kwesịrị Depgbasa na 2016 | Martech Zone
Thursday, May 12, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, edere m ya SEO nwuru anwu. Aha ahụ dị ntakịrị karịa n'elu, mana m na-eguzo n'akụkụ ọdịnaya ahụ. Google na - enweta ngwa ngwa na ulo oru nke na - egwu egwu egwu egwu egwu ma na - eme ka igwe ihe nchoputa di ala. Ha weputara usoro nke algorithms nke na - emeghi ka o sie ike igbanwe onodu nyocha, ha liri ndi ha huru na eme blackhat SEO.
Nke a apụtaghị na saịtị ekwesịghị ịkacha kachasị maka nchọta ihe. Ọ bụ naanị na SEO ọkachamara na-ejedebeghị ha nka backlinking na ogo hụrụ onwe ha nke ọrụ. Ndị ọkachamara na-achọ ihe ụlọ ọrụ anyị buru amụma banyere mgbanwe ndị a ma dọọ ndị ahịa anyị aka na ntị megide nchịkwa, ma ugbu a, ụlọ ọrụ anyị na-eme nke ọma. Mana uzo anyi di otutu uzo ma anyi adighi eleba anya na nyocha n'onwe ya. Anyị na-amata otu usoro okike nke ndị na-ajụ dijitalụ si akwado ibe ha.
Oge agafeela mgbe SEO ka na-elekwasị anya na isiokwu, backlinks na peeji nke 1. Ngwunye ọchụchọ na-akawanye amamịghe, nke ahụ bụ otu onye ndu ụlọ ọrụ David Amerland si kwuo ya, ha na-amatakwu nghọta nke ebumnuche onye ọrụ yana otu ha nwere ike isi nwee isi. N'agbanyeghị nke ahụ, nanị ịjupụta saịtị gị na isiokwu na ndị mara mma mara mma agaghị egbutu ya belụsọ ma ịmatakwu banyere atụmatụ ndị a ma bụrụ nke ọma na SEO maka 2016. Jomer Gregorio, Digital Marketing Philippines
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa dijitalụ ma chọọ ịka mma na SEO, ihe ọmụma a sitere na Jomer na-akụ na isi ihe niile dị na njikarịcha njin ọgbara ọhụrụ. Lee usoro atumatu 7 maka 2016 SEO:
Ghọta ọtụtụ ihe kachasị mkpa maka 2016 - Dabere na Moz, mobile-enyi na enyi, aghọta uru, ojiji data, readability, na imewe n'elu ndepụta. Linkskwụ ụgwọ njikọ na arịlịka ederede ama esịn ke mmetụta (na-akwụ ụgwọ njikọ pụrụ ọbụna ime gị ika mmebi).
Na-ebuli maka nyocha ekwentị - Nchọgharị ekwentị mụbara 43% YoY, yana 70% nke ọchụchọ ekwentị na - eduga na mmemme n'ime elekere ..
Gbado anya na Ebumnuche Onye Ọrụ - Kama isiokwu, chee echiche banyere isiokwu dị ogologo-ọdụ na isiokwu niile. Nchọgharị ọchụchọ abanyela ịghọta nzube onye ọrụ, yabụ ị nwere ike ide ọdịnaya ndị ọzọ na-emetụta ndị na-atụ anya na ndị na-agụ akwụkwọ.
Localga Mpaghara ka bụ ụzọ dị mma isi gaa - Ọkara ndị ahịa ụlọ ahịa ọnlaịnụ ga-aga n’ụlọ ahịa ahụ n’ime ụbọchị. Gbaa mbọ hụ na edepụtara gị nke ọma na Bing, Google, na Yahoo! nyocha azụmahịa na ozi na-agbanwe agbanwe n'oge niile.
Ogologo oge ka mma - Kwụsị ịmepụta usoro mmepụta na-adịghị agwụ agwụ nke ọdịnaya evergreen ma tinye ego na ntanetị, agụmakwụkwọ na ọtụtụ mgbasa ozi na-enye ozi kachasị mma n'ịntanetị na isiokwu ụfọdụ.
Nche saịtị na SEO - vingga saịtị gị na njikọta echekwara (dịka anyị mere), nwere ike ịnye gị ọnụ ị na-achọ karịa ndị asọmpi gị. Ọ bụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na ịnakọta ụdị data ọ bụla.
Mee Ka Achọpụta Ọdịnaya Gị Site n’Okwu - Apple Siri, Google Ugbu a na Microsoft Cortana bụ ndị niile mebere assistances na otu atụmatụ ịbụ ikike ịchọ na ịchọta ozi na ịntanetị. Tinyere ọdịnaya dị ogologo karị, isiokwu zuru ezu nwere ike inye gị ohere na nyocha olu karịa obere ọdịnaya evergreen na-erughị.
Nke a bụ 2016 SEO Strategy Infographic
Tags: 2016backlinksogologo ọdịnayadijitalụ ahịa dijitalụndịnahttpsihe dị mkpa dị n'ọkwájomer Gregorionri nri nriKeywordsobodo seomkpanaka ọchụchọnjikarịcha ekwentị mkpanakaọnọdụọkwasearch engine njikarịchaAalgọridimseo anwuolaihe isi seoseo ogoSSLonye ọrụ nzubenyocha olu